कहिलेसम्म थप्‍ने स्थानीय तहको संख्या ? - Karobar National Economic Daily
कहिलेसम्म थप्‍ने स्थानीय तहको संख्या ?
query_builderApril 27, 2017 7:39 AM supervisor_accountभगवान खनाल visibility774
संसद बैठकमा अवरोध गर्दै एमालेका सांसदहरु । तस्बिर: रासस
काठमाडौँ: निर्वाचन हुन लागेको बेला सरकार स्थानीय तहको संख्या बढाउन तयार देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले विरोध जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद् बैठक अवरुद्ध पार्‍यो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको तयारी अनि स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णयलाई एमालेले संशयका दृष्टिले हेर्‍यो ।
तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई ‘रिझाउन’का लागि संविधान संशोधन गर्ने अनि प्रदेश नम्बर २ का सहित ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप गर्ने गरी सरकारले समझदारी गरेपछि एमाले रुष्ट बनेको थियो । यसैबीच स्थानीय थप गर्ने परिपत्र फिर्ता लिने समझदारीपछि एमालेले संसद्को अवरोध भने खुलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई समेटेर स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यसमा फरक मत भने राख्दैनन् । यद्यपि, सरकार र गठबन्धनबीचको पछिल्लो समझदारीले आसन्न निर्वाचन ‘तल–माथि’ हुने हो कि भन्ने आशंका एमालेले गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनको गति अघि बढेसँगै स्थानीय निर्वाचनको वातावरणले जनतामा उत्साह देखिएको छ । संविधानले केन्द्रीकृत राज्य–सत्तालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने गरी स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिदिएपछि त्यसको ‘फल चाख्न’ नागरिक आतुर देखिएका छन् ।
तर, राजनीतिक दलहरू आआफ्नै स्वार्थमा लागेर नयाँ–नयाँ किचलो झिकिरहेका छन् । तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले दुई वर्षअघि जारी भएको संविधानमा ‘रिजर्भेसन’ राख्दै आएका छन् ।
यद्यपि, पछिल्लो समय भएको समझदारीपछि सरकारले नयाँ संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलले सक्रिय सहभागिता जनाऊन् भन्ने अभिप्रायका साथ सरकारले गरेको समझदारी ‘निकासको रामवाण’ हो भन्ने प्रत्याभूति न एमालेले गर्न सकेको छ न त नागरिकले नै । गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवकै अभव्यिक्ति पनि संशयका दृष्टिले आएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नै आनाकानी गरेका थिए । आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह सिफारिस गरे पनि सरकारले ७ सय ४४ पुर्‍याएकामा अझै बढाउन खोज्नुले राम्रो सन्देश नजाने सरोकारवाला बताउँछन् ।
फागुन अन्तिमदेखि वैशाख दोस्रो सातासम्मको अवधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार स्थानीय तहको संख्या बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखियो । यसमा तराई–मधेसकेन्द्रित दलका असन्तुष्टि मात्र होइन, प्रमुख दलहरूकै पनि स्वार्थ देखिन्छ ।
सुरुमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले कार्यविधिका आधारमा तय गरेको संख्यालाई सरकारले कार्यान्वयन नै गरेको थिएन ।
उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारको संख्या वृद्धिमा राजनीतिक समझदारी त होला तर तिनको जीवन्त सञ्चालन, आर्थिकलगायत पक्षको पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
यसअघि आयोग वा सरकार पटक–पटक नथप्ने गरी किन संख्या तोक्न सकेनन् ? कार्यविधिले लगाएको अंकुश सरकारले राजनीतिक समझादारीका रूपमा परिवर्तन गर्न सक्थ्यो । आयोगले पाएको कार्यविधि परिवर्तन पनि भएको थियो ।
आयोगलाई आफैं दिएको कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेको सरकारले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने मनसायले संख्या थप्नेतर्फ लाग्नु जायज देखिँदैन ।
सरकारले बिनाआधार स्थानीय तह थप्नुमा ‘केही स्वार्थ’ देखिएको आयोगका सदस्य माधव अधिकारी बताउँछन् । “जति बढी युनिट हुन्छन्, उति नै आर्थिक रूपमा कमजोर हुने र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन्”, उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकार कमजोर भएपछि तिनीहरूलाई प्रदेश सरकारमातहत राख्ने ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ले काम गरेको छ ।”
स्थानीय तह निर्वाचन स्थानीय निकाय